Dredge rafitra ho an'ny fikolokoloana sy fikolokoloana ala - Ellicott Dredges
Ny fananganana sedimentation dia mampihena ny famokarana herinaratra an'ny tohodrano ary ny habetsaky ny rano dia mitaky fanodinana mba hifehezana ny fiasa mahomby. Ao amin'ny fitahirizan-drano, ny antsanga manimba dia mety miorina tsimoramora ary miteraka olana amin'ny fitehirizana rano sy ny kalitaon'ny rano.
The Elpera faha-670 an'ny dragona Dragon® ary Série 870JD Jet Dragon® Ny dredge dia samy dredge suction fanapahana finday izay mety indrindra amin'ny tetik'asa fikojakojana miverimberina mba hanesorana ny silt, fasika ary vatokely avy ao ambadiky ny tohodrano, ny fitahirizana ary ny barrages.
Fikojakojana ny tohodrano Hydro
Ny fampiasana dredge hamongorana ny silt, tsara, fasika, vatokely, ary potipoti-javatra hafa avy ao ambadiky ny tohodrano sy ny manodidina azy dia mitovy amin'ny rafitra toa ny Hoover Dam any Las Vegas, Nevada (USA) na Rappode Dam any Alemanina dia asa tena lehibe izay manome toky fampandehanana mahomby ny rafitry ny famokarana herinaratra ary famatsian-drano mifanaraka amin'izany.
Ny fikorianan'ny rano voajanahary dia matetika miteraka ny filàna dredging matetika ireo fitoeram-be amin'ny toerana toa an'i Guatemala na Singapore. Ankoatry ny fanovozana sira na vatokely any amin'ny toeram-pitrandrahana, ny fanovozana tahiry dia iray amin'ireo endrika fitrandrahana mahazatra. Manome dobo fisotro rano ho an'ny olona any Malezia ny renirano ary fahefana ho an'ny tompon-tany any Oganda amin'ireo toerana hafa manerantany.
Ny sandan'ny dredging mba hitehirizana ny fitahirizana rano dia saika mandoa ny tenany noho ny zava-misy tsotra fa ny fitehirizan-drano dia loharano sy loharanon-karena voajanahary ho an'ny zavamaniry sy biby velona koa. Ny fikaohon-tany voajanahary, ny fandotoana ny rano, ary ny fandripahana ala dia samy mandray anjara amin'ny fanakanana ireo tahirin-drano amin'ny silt sy fako hafa mandrahona ireo harena voajanahary ireo. Ny dredging dia asa fikojakojana ilaintsika indrindra ho an'ireo reservoirs manerana an'izao tontolo izao.
Na dia kely kokoa aza ny habeny, ny barrages dia mitaky fikolokoloana tsy tapaka mba hiantohana ny fahaizany sy ny famokarana herinaratra. Ny dredge fanesorana fanapahana kely sy salantsalon'i Ellicott dia mety indrindra amin'ireo tetik'asa lehibe ireo - indrindra ireo any amin'ny toerana lavitra izay tsy ahafahana mandefa fitaovana vaventy.
ENR Andininy "Miala amin'ny fikorontanana goavambe ny vainafo"; TVA dia manakarama serivisy momba ny tontolo iainana Sevenson amin'ny $ 60mm fanadiovana amin'ny alàlan'ny Fleet of Ellicott® Dredges